चलचित्र पत्रकार माथि कुमारी हलमा धमलाको हमाला(भिडियो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
चलचित्र पत्रकार माथि कुमारी हलमा धमलाको हमाला(भिडियो)
फिल्मी फण्डा । सायदै कमले नच्चिने नाम हो ऋषी धमला । खरो स्वभावका पत्रकार भनेर सबैले चिनेका उनलाई सबैले केही न केही रुपमा तुच्छ रहेको बताउँछन् तर पनि उनको कार्यक्रम सबैले प्रायले हेरेका हुन्छन् । शुक्रवार राजधानीमा फिल्म पञ्चायतको प्रिमियरमा नेता पुष्प कमल दाहाल, झलनाथ खनाल, जनार्दन शर्मा, बर्षमान पुन, मिनेन्द्र रिजाल, योगेश भट्टराई देखी पत्रकार ऋषी धमला सम्म उपस्थित भएका थिए । फिल्म सकिएपछि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरु र फिल्मका कलाकारहरुसँग प्रतिक्रिया लिने क्रममा पत्रकार ऋषी धमलाको हमला चलचित्र पत्रकार माथि परेको छ ।
एक दर्जन भन्दा बढि चलचित्र पत्रकारहरुले कलाकारहरुसँग फिल्मको वारेमा जानकारी र प्रिमियर पछिको प्रतिक्रियाको अन्तर्वार्ता लिदै गर्दा ऋषी धमलाले बीचमा छिरेर कलाकारको अडियो अन्तर्वाता लिएका थिए । दर्जन बढि चलचित्र पत्रकारहरुको बेवास्ता गर्दै धमलाले आफ्नो कुराहरु कलाकार माथी प्रहार गरे । यसरी धमलाको हमला चलचित्र पत्रकार माथी पर्दा चलचित्र पत्रकारहरु खासै केही बोलेनन् । त्यसको कारण हो, धमलाको हमला कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण । उनले फोन मार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण भन्दै कलाकार नीता दुंगाना र सरोज खनालसँग वार्तालाभ गरेका थिए । लगतै चलचित्र पत्रकारहरुले तपाईले हाम्रो अन्तर्वार्तालाई बेवास्ता गर्नुभयो । बीचमा रोकी दिनु भयो भने प्रश्न धमला माथी गरे । तर धमलाले आफ्नो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको र प्रत्यक्ष भएकोले बीचमा छिरेको बताए ।
धमलाको यस्तो व्यवाहार चलचित्र पत्रकारहरु केही रुष्ट भएका छन् । चलचित्र पत्रकारहरुलाई प्रत्यक्ष असर नपरे पनि धमला स्वयमलाई पर्नु पर्ने हो । एक सिनियर पत्रकारले जुनियर पत्रकारहरु माथी त्यस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्दा धमलाको ईज्जत र व्यवाहारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? जे होस् धमलाले टेलिभिजनको सेटमा मात्र नभई खुल्ला कार्यक्रम त्यो पनि पत्रकारहरुकै बीचमा आफु खरो र तुच्छ नै छु भन्ने प्रमाणित गरेका छन् ।